Indlwana enhle yase-Nastorp - I-Airbnb
Indlwana enhle yase-Nastorp
Nävekvarn, Södermanlands län, i-Sweden
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Helena
Siyakwamukela kule ndlwana enhle eyakhiwe ngekhulu le-19 futhi yalungiswa ngo-2018, futhi inobuhle obudala obugcinwe kahle. Ime ngaphandle kwe-Nävekvarn – idolobhana elincane empumalanga ye-Södermanland. Indawo yethu isondelene noLwandle lwase-Baltic namahlathi ase-Kolmården. Indlwana iseduze ne-45 m2 enkulu futhi inekhishi elinakho konke, igumbi lokugezela, ikamelo lokulala negumbi lokuphumula.
Ekamelweni lokuphumula kunombhede owusofa oguquguqukayo, onemibhede emibili engu-80 cm. Ekamelweni lokulala elikhulu kunombhede we-160 cm. Umbhede wosana uyatholakala. Ihlobo lika-2019 kuzoba ne-patio encane enendawo yokosa inyama nendawo yokudlela etholakalayo ngaphandle kwendlwana, okwenza kwenzeke ukujabulela ubusuku obude behlobo lase-Sweden.
Sithemba ukuthi uzojabulela indlwana yethu encane, engakwazi ukuhlala kuyo unyaka wonke futhi ifudunyezwe okokushisisa ngogesi nesitofu somlilo.
Sinamamitha angu-800 ukuya ogwini lwase-Bråviken (ulwandle lwe-Baltic) namathuba okuba namabhishi anesihlabathi anobungane ezingane noma iziqhingi zakho ezicashile. Sizungezwe amahlathi ajulile ase-Kolmården, nomzila wokuqwala izintaba (Södermanlandsleden) kanye nezinye zezintaba ezihamba phambili zase-Sweden zokucaca (i-Simonsberget ne-Bistaberget). E-Nävekvarn uzothola i-marina, isitolo sokudla futhi ngesikhathi sasehlobo indawo yokudlela.
Eminye imisebenzi esiyitusayo endaweni:
I-Kolmården zoo 25 km
Řrila golf course 18 km
Indawo yegalofu yase-Kiladalens 30 km
I-Nävsjön 6 km (ichibi lehlathi elinokudoba komdlalo kanye namathuba okuthenga inhlanzi ilayisense yokudoba)
I-Stockholm 130 km
Uma ugibela isithuthuthu sizojabula ngokutusa ama-tripp amaningi amahle kakhulu endaweni. Singakuboleka namabhayisekili.
Řrila golf course 18
km Indawo yegalofu yase-Kiladalens 30 km
Indlwana itholakala amamitha angu-20 ukusuka endlini enkulu lapho sihlala khona. Indlu yethu yonke ingu-4500 m2. I-patio yakho isendaweni eseningizimu yendlwana ngenkathi i-patio yethu isendaweni esenyakatho yendlu eyinhloko. Lokhu kusho ubumfihlo benu nobabili.
Sizokwamukela endlwaneni futhi unganqikazi ukuxhumana nathi ukuze uthole usizo. Sikhuluma isi-Swedish nesiNgisi, siyaqonda isiJalimane futhi sinendodakazi ekhuluma kahle isiFulentshi.
Indlwana itholakala amamitha angu-20 ukusuka endlini enkulu lapho sihlala khona. Indlu yethu yonke ingu-4500 m2. I-patio yakho isendaweni eseningizimu yendlwana ngenkathi i-patio y…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$501.